Global Cheese Market - A demand in the future | Wire News Services
Ikhaya » Iinkonzo zeendaba zeWire » Intengiso yeHlabathi yeCheese-Ibango kwikamva
Intengiso yeHlabathi yeCheese-Ibango kwikamva
Iingxelo ezitsha zoFundo "I-Global Cheese Market 2021 yeNtengiso yeHlabathi yeNtengiso, amaThuba, uMceli mngeni, amaQhinga kunye noQikelelo lwe2028" yongezwe kwiProjekti yoPhando.
-Ukuhlolwa kweShishini kubize ingxelo ezayo njenge "Imarike yetshizi - iDynamics yeShishini leHlabathi yowama-2019-20, iTrends kunye noQikelelo, 2021-2028" kwindawo yayo ekhula rhoqo yamagama. Ingxelo ichaza intengiso yetshizi ngokulandelelana kweziteshi ezibandakanya idatha ukusuka kulwazi olubalulekileyo ukuya kuqikelelo olungathandabuzekiyo. Ikwaquka zonke izinto eziphambili ekulindeleke ukuba zenze iinguqu ezithile kwintengiso. Ke ngoko, idatha efikelelekayo kwingxelo inokusetyenziselwa ukonyusa ukuma kwenkampani esebenza kwimakethi yetshizi yehlabathi.
INgxelo yeNtengiso epheleleyo kwiNtengiso yeChizi yeHlabathi-https://industryprobe.com/industry-analysis/Cheese-Market
Isonka samasi kukutya okumnandi nokunesondlo okuninzi okwenziwe ngobisi lweenkomo kodwa kungenziwa nangobisi lweegusha, lweebhokhwe, lwenyathi, lwenyamakazi, lweenkamela kunye neeyak. Itshizi eveliswe kubisi lwenkomo ithambile kwaye inesakhiwo seprotini kunye nezibonelelo ezininzi zempilo ezitsala abathengi kwihlabathi liphela. Ngokwenziwa kwesifundo, ubisi lweBuffalo luyenyuka ngokuthandwa kwalo kwaye lukhethwa ngabantu abaninzi. Ngokukhuphuka kwemveliso yobisi lweBuffalo, intengiso yetshizi kulindeleke ukuba inyuke kwikamva elizayo. Amazwe amaninzi achitha imali kuphando nakuphuhliso lweemveliso zeshizi kunye nezibonelelo zazo ezinokubakho kuvavanyo lobisi olunokuthi lube negalelo ekukhuleni kwemakethi. Kwakhona, ngenxa yokunyuka kwenani leeresityu kunye neefestile zokutya okukhawulezayo, imfuno yentengiso yetshizi yelizwe kulindeleke ukuba inyuse kwixesha eliqikelelweyo.
Ngaba ujonge uhlalutyo olupheleleyo lwamandla okhuphiswano? Cela isampulu yePDF apha:
Ubhubhane we-COVID-19 kulindeleke ukuba ube nembono entle kwintengiso yehlabathi. Ulwazi olukhulayo malunga nempilo kunye nokutya emakhaya luya kukhuthaza amathuba okuthengisa. Imfuno ephezulu yesonka samasi ikhokelele kunqongophalo lweemveliso ezinjalo. Isidingo esonyukayo sabavelisi sokunyusa amandla abo emveliso kule ngxaki siza kuthi sizuze ngakumbi kwimarike. Ukucinga okunyukayo kunye neenkxalabo malunga nokusasazeka kwentsholongwane kuya kukonyusa ibango lesonka samasi. Ngapha koko, isiphumo sexesha elide sentsholongwane siyakwenza ukuba kulumke phakathi kwabantu, kwaye oko kuya kulindela ukuthengisa.
Njengomhlalutyi wentengiso yeeshizi zehlabathi:
Imakethi yetshizi yomhlaba wonke yahlulwe ngokwendalo. Ngenxa yokungena kwabadlali abatsha kurhwebo lwehlabathi, kulindeleke ukuba lubekho ukhuphiswano olonyukayo kule minyaka izayo. Abavelisi bagxile kwimveliso entsha kunye nokuthengisa okunamandla kunye neendlela zokuhambisa ukuhlangabezana neemfuno ezandayo ezivela kubathengi kwihlabathi liphela, oko ke kukhokelela ekukhuleni kweemarike ngokubanzi.
Abanye babadlali abaphambili kwimarike yehlabathi ngabaFama beMveliso yaseMelika, Fonterra, Groupe Lactalis, Arla Foods, Amul, Britannia Industries Limited, FrieslandCampina, Dean Foods, Danone, kunye neSaputo Inc., phakathi kwabanye.
Isicelo sokwenza ngokwezifiso:
Ukuvavanywa komzi-mveliso kukuthengisa ngobukrelekrele kwehlabathi kunye nefemu yokucebisa ngeenjongo ezingagungqiyo zokunceda amashishini ukuba afezekise iinjongo zesicwangciso kuluhlu oluthe kratya lweminikelo. Ngokusekwe kwindibaniselwano eyahlukileyo yetekhnoloji yedatha enkulu kunye nobukrelekrele babantu, iinkonzo zethu zinikezelwe ukusebenzela amashishini asebenza kwimpahla yabathengi kunye nakumacandelo oomatshini abasebenza kwimizi-mveliso. Iminikelo yethu iquka uphando olumanyanisiweyo, ukubonisana ngobuchule kunye neenkonzo zokucebisa, ubukrelekrele obukhuphisanayo, kunye nokuzibandakanya ngokusisigxina ukuzisa ukuqonda okuyinyani nokwenzekayo kwimeko yeshishini labathengi bethu. Ukudibanisa uphando kunye nokwamkelwa kwetekhnoloji, ukudlala eyona mxube yedatha ibalaseleyo, kwaye kugxile kwimpahla yabathengi kunye nakumacandelo oomatshini abasebenza kwimizi-mveliso, uPhando lweMizi-mveliso luyakholelwa ekujolise kwishishini elinye ngexesha.
I-1441 Broadway, kumgangatho we-6 - # 6131
Sityelele kwimidiya yoluntu:
NgoFebruwari 03, 2021, 07:37 GMT